ESI KWALITE TWITTER - TWITTER - 2019
Ịkekọrịta foto n'etiti ngwaọrụ mkpanaka abụọ na sistemụ arụmọrụ dị iche iche na-esiri ndị ọrụ ike. Iji ghọta nsogbu a n'ọtụtụ ụzọ.
Nyefee foto site na iOS ruo gam akporo
Ihe isi ike dị na ịnyefe faịlụ n'etiti sistemụ ndị a bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ nke ọrụ iOS. Ngwa site na ngwaọrụ ahụ na ngwaọrụ iji nyefe ihe oyiyi dị ike, ya mere na ụzọ ndị a kọwara n'okpuru, ị ga-amalite iji ngwanrọ ndị ọzọ.
Usoro 1: Bugharịa na iOS
Ngwa ngwa eji eme ihe maka nkwekọrịta nke na-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ na-ejikarị mee ihe iji gbanwee site na gam akporo ruo iOS. Iji malite mmekọrịta, onye ọrụ kwesịrị iji wụnye na gam akporo, wee mee ihe ndị a:
Download Bugharịa na iOS maka gam akporo
Jikọọ ngwaọrụ na otu Wi-Fi netwọk.
Mepee ntọala na iPhone, họrọ "Mmemme na Data" wee pịa "Bugharịa data si gam akporo".
Mgbe nke ahụ gasịrị, mepee usoro ihe omume na gam akporo ma tinye koodu nke pụtara na iPhone.
Na windo ọhụrụ, họrọ faịlụ ịchọrọ ịnyefee (maka foto nke a bụ "Mkpọgharị igwefoto"), wee pịa "Na-esote".
Idozi data ga-amalite. Maka ihe ịga nke ọma, achọrọ ohere zuru ezu.
Usoro 2: Foto Google
Ọtụtụ ngwaọrụ a kwadoro na Android nwere ngwa Google Photos, nke bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi maka ịrụ ọrụ na faịlụ dị iche iche. Nke a bụ nhọrọ kachasị adaba maka ịnyefe foto dijitalụ na vidiyo, ebe ọ bụ na ọ ga-ekwe omume ịchekwa ozi na nchekwa nchekwa ojii. Enwere ike ịnweta ya site na ngwaọrụ ọ bụla site n'ịbanye na otu akaụntụ ahụ. Nke a chọrọ ihe ndị a:
Download Google Photos maka gam akporo
Nbudata foto Google maka iOS
Mepee ngwa ma swipe n'aka nri. Na menu na-egosi, họrọ "Ntọala".
Ihe mbụ ga-abụ "Malite ma mekọrịta", na ọ ga-emeghe.
Ọ bụrụ na ọnọdụ mmekọrịta na akpaghị aka emeghị mgbe ị banyere akaụntụ, wee pịa ihe ahụ "Malite ma mekọrịta".
Họrọ otu akaụntụ nke a ga-echekwa ihe niile emepụtara. Mgbe nke ahụ gasịrị, nbudata ahụ ga-amalite.
Usoro 3: Ọrụ igwe ojii
Nhọrọ a na-egosi ọtụtụ mmemme nwere ike iji: Yandex.Disk, Dropbox, Mail.ru Cloud na ọtụtụ ndị ọzọ. Maka ịrụ ọrụ nke ọma, wụnye nsụgharị nsụgharị nke ọrụ na ma ngwaọrụ ma banye na otu akaụntụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ihe ọ bụla agbakwunyere ga-adị na ngwaọrụ ọzọ. Anyị ga-agwa gị banyere nke a site na iji ihe atụ nke Mail.ru ojii:
Download Mail.ru ígwé ojii maka gam akporo
Download Mail.ru ojii maka iOS
Mepee ngwa na otu n'ime ngwaọrụ (ihe atụ na-eji gam akporo) ma pịa akara ngosi ahụ «+» na ala nke ihuenyo ahụ.
Na menu na-egosi, họrọ "Tinye foto ma obu vidiyo".
Site na gallery na faịlụ mgbasa ozi, họrọ ihe ndị ị chọrọ, wee budata ozugbo na ọrụ ahụ ga-amalite.
Mgbe nke ahụ gasịrị, mepee ngwa ahụ na ngwaọrụ ọzọ. Mgbe mmekọrịta, faịlụ ndị dị mkpa ga-adị maka ọrụ.
Usoro 4: PC
Na nhazi a, ị ga-achọ iji kọmputa. Iji malite, ọ ga-adị mkpa ka ị nyefe faịlụ site na iPhone na PC (dịka ịpụta foto sitere na Android na-emekarị ka nsogbu). Enwere ike ime nke a na iTunes ma ọ bụ mmemme ndị ọzọ pụrụ iche. A kọwara usoro a n'ụzọ zuru ezu na isiokwu anyị dị iche:
Ihe omumu: otua esi nyefee foto site na iOS ruo PC
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ga-anọgide na-ejikọta gam akporo-smartphone na kọmputa ma nyefee faịlụ mgbasa ozi natara na nchekwa nke ngwaọrụ. Iji mezuo usoro a, naanị ị ga-enye ikikere site na ịpị "OK" na windo na-egosi na ihuenyo.
Ị nwere ike iji ọtụtụ ụzọ iji nyefee foto site na ngwaọrụ mkpanaka na sistemụ arụmọrụ dị iche iche. Ihe kachasị mfe bụ iji mmemme na ọrụ, ma na-edezi ihe site na ngwaọrụ na ngwaọrụ site na PC nwere ike ịkpata nsogbu, karịsịa n'ihi iOS.
Iji Download Manager Download Master
Jiri Windows Resource Monitor
Nsogbu Skype: enweghị ụda
Ngwakọta netwọk bụ ebe dị mma maka nkwurịta okwu nke ọma nke ọtụtụ ijeri mmadụ gburugburu ụwa. Kedu ka anyị ga-esi hụ ọtụtụ ndị enyi anyị na ndị anyị na-ekwurịta okwu n'Ịntanet? N'ezie ọ bụghị. Ya mere, anyi aghaghi igbali iji ohere ndi oru uzo mee ihe zuru oke. GụKwuo
4 ụzọ iji kewaa sel n'ime akụkụ na Microsoft Excel
Otu esi jikọọ òké ikuku na kọmputa